ကျေးဇူးရှင်ယုန်လေးကိုရန်ကုန်ရောက်ရောက်ချင်းလာကန်တော့ခဲ့တဲ့ Rap ကျားကြီးနဲ့MC ကယားလေး - Myanmarload
ကျေးဇူးရှင်ယုန်လေးကိုရန်ကုန်ရောက်ရောက်ချင်းလာကန်တော့ခဲ့တဲ့ Rap ကျားကြီးနဲ့MC ကယားလေး
လွန်ခဲ့သော ၈ လ က 10:26 November 07, 2019
အဆိုတော်ယုန်လေးဟာ ဆယ်စုနှစ်ကျော်တိုင်အောင် ဂီတလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ လျှောက်လှမ်းနေသူတစ်ယောက်ပါ။ သူဟာ သီချင်းတိုင်းကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရေးသားသီဆိုတတ်သူ တစ်ယောက်ပါ။ ယုန်လေးဟာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကိုလည်း ဒါရိုက်တာအဖြစ် ရိုက်ကူးနေသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Photo Credit - Yone Lay's Facebook
သူကတော့အနုပညာအလုပ်တွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကကြိုးစားနေတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအက်ရှင်ကားကြီးတွေကိုလည်းပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပြီးပရိသတ်အခိုင်အမာနဲ့အောင်မြင်နေတာပါ။ သူ့ရဲ့ဇာတ်ကားတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြည့်ရဖို့ခက်ခဲတဲ့ဇာတ်ကားမျိုးတွေဖြစ်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကလည်းသူ့ရဲ့အက်ရှင်ကားတိုင်းကိုအားပေးနေကြတာပါ။ အဆိုတော်အလုပ်သာမကသရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာပါထူးချွန်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေသာမကအနုပညာရှင်တွေကပါချီးကျူးနေရတာပါ။
အခုမှာလည်း သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် ပုံရိပ်လေးတစ်ခုတင်ထားတာပါ။ ဒါကတော့ " MV လေးထွက်ပြီးထဲက ကျွန်တော်တို့ ပျော်လွန်လို့
ငိုပြီးပြီ ဆိုပြီး ဖုန်းဆက်ပါတယ် ။
ကွင်းထဲ အထိ လာကန်တော့တဲ့ ညီလေးနှစ်ယောက်ကို
တကယ်ကြည့်ပြီး ပီတိဖြစ်မိပါတယ် ။
လေ့လာစရာတွေ လေ့လာပြီး ကိုရူးသွတ်တဲ့ အနုပညာကို
ဆက်လက် ရူးသွတ်နိုင်ပါစေ .
Nov 8 မှာ Music World
Nov9မှာ Lighting Festival
Nov 12 မှာ လမ်းမတော် တန်ဆောင်တိုင် မှာ သူတို့
ဖျော်ဖြေမှာပါ . အားပေးကျဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။" ဆိုပြီး ရေးသားထားတာပါ။ ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီသတင်းလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Source - Yone Lay's Facebook